Mmiri mmiri dị egwu n'akụkụ ụsọ oké osimiri Valencia | Network Meteorology
Mmiri mmiri dị egwu n'akụkụ ụsọ oké osimiri Valencia
Monica sanchez | | Ihe gbasara ihu igwe
Foto - Akwụkwọ akụkọ
La Oké ifufe nke hapụrụ obodo Valencia nwere nnukwu lita 152 kwa square mita na n'okporo ámá ya, bịara na mberede: e nwere mmiri iyi dị egwu n'akụkụ ụsọ mmiri Valencian, kpọmkwem site na mpaghara Sueca, El Perelló na Cullera.
Dị ka Agencylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihu Igwe (AEMET) si kwuo, ọ bụ »sharper na ndị ọzọ nnukwu nnabata weghara n'ikpere mmiri»Nke Obodo Valencian. Ọ bụ n'ezie nnukwu.
1 Gịnị bụ mmiri hoses?
2 Uwe mmiri na Valencia
Gịnị bụ mmiri hoses?
Aka mmiri, nke a makwaara dị ka mmiri iyi, abụghị ihe ọzọ mmiri ozuzo nke mebere n'oké osimiri. Ha na-ejikọtakarị na igwe ojii cumuliform, nke a na-ahụkarị oge mgbe ikuku adịghị agbanwe agbanwe. Ha anaghị emetụ ala aka, mana Ga-akpachara anya, ebe ọ bụ na a na-etolite ha n'ime oke ikuku ọkụ eletrik ma na-emepụta ifufe ruo 512km / h.
Oke mmiri ozuzo a dịkarịsịrị na Mediterenian, ọ bụ ezie na ọ bụghị mmadụ niile nwere ohere ịhụ ha mgbe ha ga-achọ. Ma na-ekele ịdị mma na anyị ga-enwe foto na vidiyo nke ndị nwere obi ụtọ. Na eziokwu bụ na nke a kpụrụ ụnyaahụ n'akụkụ ụsọ oké osimiri Valencian dị egwu.
Uwe mmiri na Valencia
Dịka ị pụrụ ịhụ na vidiyo ahụ, onye mbido anyị nwere ezigbo nkọ. Dị ka AEMET si kwuo, o yikarịrị ka oké ifufe ahụ rutere Valencia enweelarị ikuku ikuku, nke mere na mmelite ahụ mere ka ọ pụta ìhè, si otú ahụ na-akpata otu n'ime ihe ndị kasị mma eke mmụta ihe nkiri nke ụnyaahụ.
Na mgbakwunye, ha gosipụtara na a na-edekọ ọtụtụ ọkụ ọkụ n'oké osimiri, ọkachasị n'etiti Mareny de Barraquetes na El Perellonet, ya mere Achọpụtaghị ọdịdị nke thrombi ọzọ, ebe ọ bụ na ụsọ oké osimiri nke ógbè Valencia na Castellón nwere ọnọdụ dị mma maka ihe ndị a dị ebube gbasara ihu igwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Mmiri mmiri dị egwu n'akụkụ ụsọ oké osimiri Valencia
Nnukwu mbibi na mwepụ n'ihi oke mmiri ozuzo
Nnukwu mmiri mmiri nke afọ iri dara na Valencia